Real Madrid Oo Qarka U Saaran Fadeexad Cusub Iyo Bixitaankii Cristiano Ronaldo Oo Dhibaatadiisa Ay Dareemayso. - Gool24.Net
Real Madrid Oo Qarka U Saaran Fadeexad Cusub Iyo Bixitaankii Cristiano Ronaldo Oo Dhibaatadiisa Ay Dareemayso.
May 15, 2019 Apdihakem Omer Adem
Kooxda Real Madrid ayaa qarka u saaran dhigista rekoodh madaw oo ku xun taariikhdeeda balse wali waxa ay haystaan fursada ay kaga baxsan lahaayeen taariikh xumadaas kulanka ugu dambeeya horyaalka La Liga ee ay la yeelan doonaan kooxda Real Betis.
Rekoodh xumada ay Madrid ku dhawdahay ayaa ah in ay kulankaas soo socda samaysan karaan rekoodhka ah inay xilli ciyaareedkan ka dhigtaan midkoodii ugu xumaa dhinaca gool dhalinta ee qarnigan 21-aad.
Bixitaankii Cristiano Ronaldo ayaa kooxda ree Spain ku keenay dhibaatada ah weeraryahano yaraan iyo gool dhalinteedii oo soo koobantay.
Karim Benzema ayaa soo dhaliyay 30 gool isla markaana kusoo dhawaaday tirooyinkii loo diiwaan galin jiray Ronaldo oo sagaal xilli ciyaareed ugu soo haliyay 451 gool balse Gareth Bale oo kamid ah xiddigaha laga filayo isbedelka ayaa markale fashilmay.
Iyadoo aysan baahi badan kooxdu ku hoos muujin tababarayaashii hore ee Lopetegui iyo Solari ayay haatana si lamid ah ku hoos samaynayaan Zidane waxaana ay u muuqdaan kuwo gabi ahaanba niyad jabsan.
Goolasha ay xilli ciyaareedkan soo dhaliyeen dhammaan xiddigaha Real Madrid ayay isku gayntoodu noqonaysaa 63 gool waana in ka yar saddex gool rekoodhkoodii gool dhalineed ee ugu xumaa.
Rekoodhka gool dhalineed ee ugu xumaa ayaa ah mid Real Madrid ay soo samaysatayxilli ciyaareedkii 2006-07 waxaana ay soo dhaliyeen kaliya 66 gool sidaas darteed ayay kooxda haatani u baahan doontaa inay afar gool ka dhaliso Betis Axada soo socota si ay u dhaafto ugana badbaado ceebtaas.
Xogtan ayaa ah mid Real ku celinaysa wakhtigii xumaa ee ka hor imaatinkii Ronaldo markaas oo ay xilli ciyaareedkii ay lasoo saxeexdeen kii ka horreeyay soo dhaliyeen 83 gool oo ah tiro mida haatan aad uga fiican.
Gool dhalintii Real ee ugu hooseysay wakhtigii CR7 ayaa ahayd 118 gool oo ay soo dhaliyeen 2016-17 halka mida ku xigta ay ahayd 121 gool 2011-12.